ပိန်စေတဲ့ Green Coffee | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ပိန်စေတဲ့ Green Coffee
ပိန်စေတဲ့ Green Coffee
Posted by မမလေး on Sep 15, 2010 in Health & Fitness | 1 comment
အဲ့ဒီ Green Coffee က တစ်ပတ်ကို ၅ ပေါင်မှ ၁၅ ပေါင်ထိ ကျပါတယ်တဲ့ . . . လက်ကမ်းစာစောင်မှာရေးထားတာပေါ့နော် . Side Effect လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ သောက်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် . . . တစ်နေ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်သောက်ရုံနဲ့ ပိန်တယ်ဆိုတော့လေ . . .
တစ်နေ့က န၀ဒေးလမ်း ကဆိုင်မှာ အဲ့ဒါလေးတွေ့လို့ ၀ယ်လာမိတယ် ။ ဆိုင်ကလည်း အရမ်းရောင်းရတယ်တဲ့ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ ။ ပြီးတော့ အရင်က ၁၂၀၀၀ ပေါ့ ။ ခု ၁၀၀၀၀ ပဲရှိပြီး တစ်ဗူးဝယ်ရင် သုံးထုပ်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်တဲ့ ။ မနက်စာ မစားခင် မိနစ် ၃၀ အလိုမှာ သောက်ရတယ် ။ Gong Zhu ကော်ဖီမကြိုက်လို့ ကော်ဖီမသောက်ပါဘူး ။
အဲ့ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့ ရင်တုန်တယ် . အစာသိပ်မစားချင်တော့ဘူး ။ ဗိုက်တော့မအောင့်ဘူး ။ ရိုးရိုးကော်ဖီသောက်ရင် အဲ့လိုပဲဖြစ်တတ်တာလား ။ မဟုတ်ရင် Green ကော်ဖီကြောင့်ပဲ ကတုန်ကယင်ဖြစ်တာလား ? ? ? ရိုးရိုးကော်ဖီသောက်ရင် ကတုန်ကယင် မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ Green ကော်ဖီကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဒီ ပိန်တဲ့ကော်ဖီက Gong Zhu နဲ့ မတည့်တာပဲပေါ့နော် . . . အဲ့ Coffee သောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်ထုပ်လောက်တော့ နမူနာ စမ်းသောက်ကြည့် ကြည့် လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
I like this coffee. This coffee is really slimming coffee. I have been drink this coffee2box(36 pk).Everybody Test this.After6days drink coffee get good result.Good Luck.